Disposable anodzivirira chifukidzo, KN95 chekudzivirira chifukidzo, Nitrile Magorovhosi Chipfeko - Sinnovation
Pepa poly bhegi
Rakarukwa asiri-rakarukwa rinoumba kavha
Akaiswa profiles emvura kurongedza
Aluminium foil / aluminium firimu kurongedza
PP vharuvhu bhegi
Pe vharuvhu chiteshi kavha
General PE kurongedza
Fibc / hombodo hombe
Bopp bhegi shandisa polypropylene yakarukwa jira sejira remuviri rinogona kuita kuti pasuru yako inakidzwe nekusimba kukuru Dhizaini dzakasiyana senge (backseam, denderedzwa, zvigunwe zvigunwe, perforation, anti-skid anodhinda uye gussets nezvimwewo) zvinogona kusangana nevatengi zvakasiyana zvinodiwa.
Zvinoenderana nemaumbirwo, pane denderedzwa jumbo bhegi, sikweya jumbo uye U mhando jumbo bhegi ine yepamusoro yekusimudza chiuno, kana divi yekusimudza chiuno kana pasi yekusimudza chiuno. Kazhinji ine inlet spout uye nzira yekubuda spout.
Pepa poly bhegi1 Iyo yakavakirwa pa p bhegi, iyo inonziwo machira mupfupi, kuumbiridza firimu uye bepa netepi yekukanda nzira. Iyo inoshandiswa kurongedza dzakasiyana siyana dzemakemikari zvinhu, zvakadai sehupfu uye granular mbichana zvinhu sePOM, ABS, polystyrene, poly-formaldehyde, polyvinyl chloride, styrene butadiene rabha, mainjiniya epurasitiki uye nhevedzano yeupfu, granular zvinhu nezvimwe.
PP rakarukwa bhegi, inozivikanwawo seyoka bhegi reganda, imwe yemapurasitiki, inoshandiswa kuputira. Iyo huru zvinhu ndeye polypropylene (PP). Iyo inogadzirwa kunyangwe extrusion, ichitambanudzira mu tepi mutsvuku, kuruka uye kugadzira bhegi. Usage: zvinowanzoshandiswa chiputiriso mhando powdery uye granular nhumbi.
Weifang Sinnovation Chiremba Technology Co., Ltd.
Disposable yekudzivirira mask, Ruoko sanitizer
Mask muchina, KN95 yekudzivirira mask
Kupenya nyeredzi epurasitiki Co, Ltd.yemabhizimusi epasi rese kune zvigadzirwa nekutengesa zvigadzirwa zvepurasitiki uye zvigadzirwa zvekuputira mapepa, inovhara nzvimbo yemahekita zana, iro bazi reVietnamese rinofukidza nharaunda yemahekita makumi mashanu, chirimwa cheCambodia chinofukidza nharaunda yemahekita makumi mashanu. Nemuchina wakadhirowa wekudhirowa, wedenderedzwa chirukiso, muchina wekudhinda muchina, laminating muchina, bhegi kugadzira muchina, wekudhinda muchina, firimu ichivhuvhuta muchina, granulator yekugadzira etc.mutsara, technical technical kusvika kune epasirese epamberi nhanho. Iyo kambani ine mazana ehunyanzvi emagetsi timu, ine hupfumi hwekugadzira uye manejimendi ruzivo. Iyo kambani yakashongedzerwa nehunyanzvi hwekuyedza zviridzwa, nyanzvi yekuongorora timu uye yakaoma mitemo yekuongorora uye mirau, uye kuburikidza neiyo ISO mhando manejimendi manejimendi sisitimu uye QS chitupa, mhando yakasvika padanho repamusoro mune iwo iwo maindasitiri. Kubva pakagadzwa kambani iyi, "zano rekutanga, kubudirira mubhizinesi, manejimendi anotungamira" bhizinesi uzivi, nhanho nhanho yekuve China akafanana mabhizinesi mune chiyero chebhizinesi, chakanyanya kukurudzira mune emabhizinesi emakambani.
Isu tiri nyanzvi inobata mumasikisi, disinfectants, bacteriostatic solution, mabhakitiriya ehutachiona, kutsvagura kwezvipfuyo uye kusimudzira, kugadzirwa nekutengesa emabhizimusi epamusoro.
Adress: West of Youai mugwagwa uye kuchamhembe kweYongkang mugwagwa, Weifang Economic Development Zone
Nitrile Magorovhosi Chipfeko
KN95 mask yekudzivirira
Disposable anodzivirira mask
China yakave mugadziri mukuru uye ...
China yakasunga mirau pane ex ...